About - bestpvcfence.com
Unogamuchirwa kuZhejiang Jovyea Plastic Co.Ltd, pano unogona kutenga marudzi ePVC fence, PVC decking, PVC kurongedza koruva etc, tichakupa basa rakanakisisa. Kana iwe uri mukonzi, mupurisa wepurojekiti, kambani yeimba yekutengesa kana munhu wekutenga, iwe unogona kunge uine purogiramu yakazara yepurojekiti yekugadzirisa kugutsa zvimwe zvaunoda paunenge watenga chigadzirwa chedu. Iwe chete unoda kunyora email kune sales@bestpvcfence.com kana kutiidane isu zvakananga ku05722269152 kuti tibvunze. Izvo zvehutengi hwekutengesa uye vashandi vekambani vanozopa mazano akakurumbira anobva pamabasa ako.
Jovyea ndiye mugadziri wemhizha ane hanya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwePVC fence profiles. Zvose zvemishonga yedu inoteerera zvakasimba maitiro emhando dzenyika uye dzinofanirwa zvikuru mumakambani edu.we vane UL94, mushumo wekuongorora weVV kuti vaongorore. Kuwana nzvimbo ye 43000 mita mamita, tine vashandi vanopfuura 400, uye kukwanisa kwekugadzira kwegore kune mamiriyoni 30,000. Iyo kambani yakagadzirirwa sangano rakakwana reGermany brand KraussMaffei uye mishonga yakasungirirwa yakakwana yekugadzira mapurogiramu ePVC. Nzvimbo dzedu dzakagadzirirwa zvakanaka uye hutano hwakanaka hwekutonga muzvikamu zvose zvekugadzira zvinoita kuti tikwanise kutsigira mutengi kugutsikana. Pachikonzero chekugadzirwa kwekombiki, kambani yakabatanidzwa mukugadzirisa, kushambadzira uye unyanzvi hwokugadzira. Isu inonyanya kukoka ndiyo America, Canada, Yurope, Australia, New Zealand, etc.. Takave nechinangwa chekuti tive nehutano hwakanaka hwePVC fence munharaunda iyi Tiri kutarisira kuva mudiwa wenyu webhizimisi mune ramangwana. Tinokugamuchirai nomwoyo wose kuti mushanyire kambani yedu kana kuti tibatane nesu kuti tibatane!